AJA's HDR Image Analyse 12G waxay bixisaa tayo sare leh 4K / UltraHD HDR | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » AJA's HDR Image Analyzer 12G Waxay Bixisaa Tayada 4K / UltraHD HDR tayo sare leh
AJA's HDR Image Analyzer 12G Waxay Bixisaa Tayada 4K / UltraHD HDR tayo sare leh
Ku dhawaad ​​seddex sano, AjA Video Systems ayaa la yaab ku noqotay warshadaha fiidiyaha mihnadlaha ah iyada oo la siinayo soo saareyaal kala duwan oo hogaamiyayaal ah iyo iskaashato soo koraya iyada oo loo marayo is dhexgalka iyaga safka wax soo saarka. Tusaalooyin dhowr ah oo shirkadaha waaweyn ee warbaahinta, oo ay ka mid yihiin:
Guryaha wax soo saarka kadib
Wadayaasha gawaarida gawaarida
ka adduunka oo dhan u jeesato AjA Video Systems'teknolojiyada. AJA waxay ka kooban tahay badeecado tayo sare leh Kuwaas oo la isku halleyn karo oo farsamo ahaan la beddeli karo, iyo wixii ugu dambeeyay Falanqaynta Sawirka HDR waa marag kale oo aasaasi ah.
The Falanqaynta Sawirka HDR 12G waxay bixisaa qalab dhameystiran oo qalab ah oo loogu talagalay falanqaynta wax ku oolka ah ee ugu dambeeyay 4K /UltraHD Heerarka HDR. Waxsoosaarkan ayaa leh wax kabadan hal xarig leh 12G-SDI, oo ay ku jiraan HLG, PQ, Rec.2020 iyo Rec.709 oo ka socda 8K / UltraHD2 / 4K /UltraHD/ 2K /HD waxyaabaha ku jira aaladda waqtiga saxda ah ee ku habboon aaladda 1RU.
AJA HDR Image Analyzer 12G waxay taageertaa waxyaabo badan oo wax soo saar ah sida
Qaababka LOG Camera
The Falanqaynta Sawirka HDR 12G sidoo kale waxay bixisaa taageero gamut midab leh BT.2020 oo ay weheliso BT.709 dhaqameedka. Awoodda qalabka AJA wuxuu hubiyaa isku halleyn sare iyo waxqabad, oo leh 4x 12G-SDI bidirectional I / O, iyo isku xirnaanta DisplayPort. Falanqeeyahaani waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo iyada oo aan loo eegeyn goobta, iyo waxaas oo dhan oo loogu mahadcelinayo qaabka '1RU form factor', kaas oo ku habboon deegaanno badan, oo siinaya isticmaale kalsoonida looga baahan yahay soo saarista iyo saadaalinta HDR joogto ah iyo saadaalin.
Habka Falanqaynta Sawirka HDR 12G
The Falanqaynta Sawirka HDR 12G waxaa lagu soo saaray iskaashi lala yeesho Colorfront, oo ah shirkad horumarinta barnaamijyada softiweerka ah oo ku takhasustay cilmiga teknoolojiyada si heer sare ah u ah soosaarka dhijitaalka ah ee warshadaha sawirka mooshinka iyada oo diiradda la saarayo bixinta nidaamka ubaxyada dijital ah ee sida weyn loo aqbalo. Dhowr sare Hollywood Istuudiyaha iyo tas-hiilaadka boostada ayaa loo adeegsadaa hannaanka meeraha dhijitaalka ah ee 'Digitalfront' labadaba filimadooda muuqaalka leh iyo waxsoosaarka telefishanka episodic.
Maxaa ka dhigaya AJA's HDR Image Falanqeeyaha 12G maalgashi weyn waa in ay bixiso isku xirnaanta lagama maarmaanka u ah taageerida 8K / UltraHD2 HDR iyo la socodka wax soo saarka SDR iyo falanqaynta socodka socodka. Qalabkani wuxuu sidoo kale bixiyaa isla agab tayo sare leh iyo agab falanqeyn saxan oo diyaar u ah dhammaan qaabab kale oo fiidiyow ah.
Xaraashka Sawirka HDR ee 12G wuxuu bixiyaa Websaydh Weyn oo xoog leh oo laga heli karo meel kasta oo shabakad ka ah shabakad kasta oo masawir ku ah OS kasta. Tani waxay u oggolaaneysaa xakameynta kombiyuutarka fogaan ah waxayna fududeyneysaa marin u helka marka lagu dhejinayo HDR Image Analyzer 12G jawiga rugaha, la dejiyay, qolalka kontoroolka xarunta, waaxaha QC, iyo inbadan. Tani waxay sii siineysaa isticmaale awood u leh inuu cusbooneysiisto HDR Image Analyzer 12G meel fog fog iyo inuu kala sooco diiwaanka iyo shaashadda ilaa meel kasta oo looga baahdo. Falanqeeyaha Sawirka HDR 12G wuxuu sidoo kale bixiyaa is beddel xaalad Auto HDR oo loogu talagalay khad toos ah oo midabaynta HDR ah.
Falanqaynta Muuqaalka HDR 12G Iyo Lahaanshaha Isku Wafaqsan
Muuqaalka 'HDR Image Analyzer' 12G's interface wuxuu siiyaa adeegsadaha qaab qaabeyn ah oo loogu talagay daawashada aaladooda iyo muuqaalkooda inta lagu gudajiro howlaha shaqadooda. Fureyaasha dhaqsi ee muhiimka ah ee falanqeeyaha ayaa awood u siiyaya in laquso qaababka caadiga ah ee loo adeegsado sida qalabka iyo aragtida adeegsadaha loo soo bandhigo. Haddii adeegsaduhu rabo inuu sii habeyn dheeraad ah sameeyo, waxay sidoo kale dooran karaan aalad gaar ah oo lagu muujiyo mid kasta oo ka mid ah rubuc-gelyada iyadoo la adeegsanayo midigta guji afargeeslaha isla markaana doorto aaladda ay doorbidayaan. Isticmaalayaasha ayaa waliba dooran kara aaladooda iyagoo galaangal u yeelaya xulashooyinka rubuc ka soo baxa menu menu.
Falanqeeyaha Sawirka HDR 12G iyo HDR Monitoring
Soosaarka HDR wuxuu u baahan yahay aalad la isku halleyn karo oo la saadaalin karo oo loogu talagalay la socodka iyo falanqaynta dhammaan tallaabooyinka habraaca. Tan waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in aragtida farshaxaneedka adeegsadaha laga soo raaco kaameeraha ilaa dhammaadka adeegsiga muuqaalkiisa ugu dambeeya. AJA's HDR Image Analyzer 12G waxay xaqiijineysaa in isticmaalegu uu si buuxda gacanta ugu hayo xulashooyinkooda farsamo, taas oo u sahasha inay qabsadaan, gudbiyaan soona gudbiyaan agabkooda HDR / SDR.
Dheeraad ah / Fidsan HDR Image Analysers 12G Tilmaamo
Dhowr astaamood oo ah Sawirka HDR Falanqaynta 12G waxaa ka mid ah:
Waxyaabaha Soo Kordhinta Range Range
Fiidiyowga I / O
Taageero Desktop Fog ah
QC (Xakamaynta Tayada)
Garsooraha HDR ee ugu dambeeya
Qalabka Falanqaynta HDR
Waxyaabaha Galitaanka Kaameeraha
Ilo Video ah
Meelaha la xushay ama la keydiyey
Dib u xusuusasho deg deg ah iyo qabashada goobta lagu qabtay
Falanqaynta ayaa loo adeegsaday boos midab leh
Kuwaani oo ay weheliso astaamaha la dheereeyay, oo ay kujiraan interface raster oo sarreeya ayaa ah waxa loo xilsaaro hufnaan farsamo gaar ah HDR Image Analyzer 12G. Tani waxay muhiim u tahay adeegsadaha inuu isha ku hayo waxyaabaha ku habboon ee maadada lagu qurxiyo markay falanqeynayaan qalabkooda HDR.
Falanqaynta Sawirka HDR 12G Iyo Saxnimada Sawirka
Falanqeeyaha Sawirka HDR 12G wuxuu bixiyaa sawirka sawirka kristine iyo awooda lagu dhejiyo faahfaahinta ugu yar ee falanqaynta saxda ah ee agabyadooda. Dhowr ka mid ah qalabkan waxaa ka mid ah:
Tayada sare, aad u saxsan UltraHD interface interface
Awoodda lagu habeeyo aaladda lagusoo bandhigi karo afarta rubuc ee aragtida
Mitirka maqalka codka
Ka baxsan Gamut
Habka Midabka Beenta ah
Tan iyo 1993, AjA Video Systems waxay soosaartay helitaanka fiidiyowga helitaanka fiidiyowga, beddelka, I / O, iyo xalalka qulqulka leh ee macaamiisha u fidiyay dabacsanaan aan fiicnayn, waxqabadka, iyo isku halleynta. Xaraashka Sawirka HDR 12G waa fidinta mabaadi'da asaasiga u ah iyo ilaa iyo inta ay ka qaateen shirkadan tikniyoolajiyadeed si ay u noqdaan ku biiriyaha impeccable ee warshadaha mihnadlaha xirfadeed.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku AjA Video Systems iyo HDR Image Analyzer 12G, ka dib iska hubi www.aja.com/.
Anigoo ah qoraa madax-bannaan, waxaan wax ka qorayay, tafatirka, iyo dib-u-hubinta shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin maqaallo, sheekooyin gaagaaban, iyo shaashad-baadhis.
In badan oo waayo-aragnimadayda iyo khibradayda ah ayaa ku sii kordheysa xirfadaheyga cilmi-baarista la-qabsiga iyo dabacsanaankeyga markay timaado maado kasta oo aan ka shaqeeyo. Waxaan qorey oo ka shaqeeyey mowduucyo ay ka mid yihiin teknolojiyad, filim, qoraal-qorid, dib u bilaw qoritaanka, daraasaadka suugaanta, Kheyraadka aadanaha, waxbarashada, sheekooyinka gaagaaban, gabayada, iwm. Waxaan ka hadlay aagag badan intii hawshaydu jirtay oo aan waligaa kama baqin inaad qabatid noocyada kala duwan ee ay bixiyeen kuwa cusub.
Xiriirka Astaanta Shaqada:
ASUSTOR Barnaamijyadoodii Ugu Cuslaa Iyo Magaalada 'Localkerstor' 8 iyo 10 - January 22, 2020
Teknolojiyada Artec waxay Soo Bandhigi Doontaa XENTAURIX Iyo Teknolojiyad Fiiriye Vidiyo ah 2020 NAB Show - January 22, 2020
2020 NAB Show: Arista ayaa ka caawin karta Soo-saareyaasha inay dhisaan Shabakado Daruuro wanaagsan oo loogu talagalay Maareynta Xogta - January 22, 2020
AjA AjA Video Systems Broadcast Engineer Broadcast Engineering midabkeed Graham Chapman Prmoted toEditor Falanqaynta Sawirka HDR Falanqaynta Sawirka HDR 12G dhexgalka isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka TV Technology Video Engineer	2019-11-29
Previous: Wakiilka adeega Macaamiisha
Next: Maareeyaha Jr Cod iyo Video